Buddhism Archives | XYZ NEWS
မြတ်စွာဘုရားရှင်တောင် မကယ်နိုင်တဲ့ မိသားစု
အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်ကိုယ်တော်မြတ် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်ဘက် ကြွနေစဉ် လမ်းမှာ ပြိတ္တာလေးယောက်ကို တွေ့လိုက်တော့ တအံ့တသြနဲ့ မေးလိုက်မိတယ်။ “ပြိတ္တာမ၊ မြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာလိုက်တာ။ တစ်ယောက်က ရဲရဲတောက်နေတဲ့ သလေးစပါး ဖျင်းတွေကို ခေါင်းပေါ်မှာ ဖြန့်ကြဲပြီး ပူလောင်တဲ့ဒဏ်ကို မပြတ်ခံစား နေရတယ်။ …
December 5, 2019 By EditoraBuddhism
ဘုရားရှင်အား တစ်ကြိမ် ဦးချရခြင်းအကျိုး မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်ပါ အများအတွက်လည်း မျှဝေပေးခဲ့ပါ
တစ်ခါတော့…ဘုရားရှင်ဟာ နံနက်မိုးသောက်ထတဲ့အချိန်မှာမဟာကရုဏာသမာပတ်ဝင်စားရင်း စဏ္ဍာလတင်းကုပ်မှာနေတဲ့ သက်တမ်းကုန်နေတဲ့အဘွားအိုတစ်ယောက်ကို သွားမြင်တော်မူပါတယ်သူ့နာမည်က စဏ္ဍာလီတဲ့။ စဏ္ဍာလီ အမည်ရှိတဲ့ အဘွားအိုဟာ အခုမနက်ခင်းမှာပဲ သေတော့မယ် ပြီးတော့ ဘာကုသိုလ်မှလည်း မရှိတဲ့အတွက်ငရဲလည်း ကျမယ်တဲ့။ငရဲမကျစေချင်တဲ့အတွက် ဘုရားရှင်ဟာသံဃာပေါင်းများစွာခြံရံပြီးရာဇဂြိုဟ်မြို့ထဲကို ဆွမ်းခံကြွတော်မူပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အဘွားအိုကလည်း မြို့ပြင်အထွက်လမ်းမှာ …
November 17, 2019 By EditoraBuddhism
ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရ မယ်။ မဲသွားပေးစရာမလိုပါဘူး ဆိုတဲ့ သူတွေလည်းရှိတယ်။ သာ မန်အားဖြင့် ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဟုတ်သလို ထင်ရတာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရ မယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ခွဲခြမ်းကြည့် ရင် လုပ်တာရယ်၊ စားတာရယ် …
September 10, 2019 By EditoraBuddhism
မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ၏ ဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေဖြစ်သည့် ကျဉ်ပင်ရွာကား မြင်းခြံမြို့ အနောက်ဘက် ယွန်းယွန်းတွင် တည်ရှိပါသည်။မြို့နင့် တစ်မိုင်ကျော်လောက်သာ ဝေးသော ရွာ ဖြစ်၍ လောကရေး ဓမ္မရေး အရေးရေးတွင် နောက်မကျလှပါ။ ထိုရွာ၏ သူကြီးမှာ ဦးဆုံဖြစ်၍ …
September 7, 2019 By EditoraBuddhism
ယောဆရာတော်ကြီးသည် ငယ်စဉ် စာသင်သားဘဝကပင် မည်သည့်နေရာကိုမျှ အလည်အပတ်ကြွလေ့မရှိပေ။စာဖြေခြင်း၊ တရားဟောကြွခြင်း၊ သံဃာ့ကိစ္စဖြင့်ကြွခြင်း စသည့်ကိစ္စများဖြင့်သာ ထိုထိုမြို့ရွာများသို့ ရောက်ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားဖူး အကြောင်းပြ၍လည်း ကြွလေ့မရှိပါ။ တပည့်များက ဘုရားဖူးကြွမလို့ပါ။ဘုရားဟု လျှောက်လျှင်လည်း လက်မခံ ” သိမ်ထဲကဘုရားကို ဖူးသွားဦးလေ၊ …
August 20, 2019 By EditoraBuddhism
တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဖူးမြှော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်ကိုဖူးလိုက်ပါကံထူးလို့ဖျာပုံသူဖျာပုံသား များ နှင့် မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးချိန်တန် ဖူးထိုက်လို့.ဖူးမျှော်ခွင့်ရလို့ ထင်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကလေးဘဝတည်း က ဘိုးဘိုး ၊ဘွားဘွား၊ဘိုဘေး အစဉ်အဆက်ကတည်း က ဖျာပုံမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား အံ့တော် …
August 17, 2019 By EditoraBuddhism
ဘဝမှာအခက်​အခဲ တစ်ခုခု ကြုံလာရင်​ တ​နေ့ (၉) ပတ်​စိပ်​ပြီး (၉) ရက် ​အဓိဋ္ဌာန်​ဝင် ပုတီးစိပ်​နည်​း​လေး​
စိတ်​ပျံ့လွင်​့သူများအတွက်​ ပုတီးစိပ်​နည်​း​လေး​ပေးပါ့မယ်​။ပုတီးစိပ်​နည်​း အမျိုးမျိုးရှိလို့ ကိုယ်​ကြိုက်​နှစ်​သက်​ရာ စိပ်​လို့ရပါတယ်​။တခုခုကိုစွဲစွဲမြဲမြဲ စိပ်​​စေချင်​ပါတယ်​။ ဦးဇင်​း​ပေးတဲ့ပုတီးစိပ်​နည်​း​လေးကို ​အောက်​မှာ​ရေး​ပေးထားပါတယ်​။တခါ်​တ​လေကိုယ်​့ဘဝမှာအခက်​အခဲတခုခုကြုံလာရင်​ တ​နေ့ (၉)ပတ်​စိပ်​ပြီး (၉)ရက်​အဓိဋ္ဌာန်​ဝင်​ပြီးစိပ်​ကြည်​့ပါ။ တစ်​ရက်​တည်​း( ၉ )ပတ်​ကို တခါတည်​းမစိပ်​နိုင်​ရင်​လည်​း ခွဲစိပ်​လို့ရပါတယ်​။ဥပမာ မနက်​ သုံးပတ်​၊​နေ့လည်​ သုံးပတ်​ ည …
August 5, 2019 By EditoraBuddhism
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ စွဲလမ်းစိတ်တွေ၊ အတ္တတွေ၊ မာနတွေ၊ လောဘတွေ၊ စည်းစိမ်းတွေကြားမှာ ယစ်မူးအချိန်ကုန်နေတတ်ပြီး မတည်မြဲသောအရာကို တည်မြဲတယ် ထင်မှတ်ကာ ရန်သူမျိုး (၅)ပါးကိုတောင် မကြောက်တော့ဘဲ တတ်မက်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောတော်မူတဲ့ စွန့်လွှတ်ခြင်းဟာ မြတ်သောတရားဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို …
August 1, 2019 By EditoraBuddhism
“အခုလူဖြစ်နေသူ အားလုံး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၆၀၀ ခန့်က ဘဝ တခုမှာ အတူဆုံဖူးခဲ့ကြတယ်”
လွန်ခဲ့တဲ့ သာသနာနှစ် ၂၆၀၀ ခန် ့က ခု လူဖြစ်နေသူအားလုံး ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်မှာ တီထွေးဘဝနဲ့အတူဆုံဖူးကြတယ် ဆိုရင် လက်ခံကြလား?? လက္ခံ မခံ အသာထား ဗဟုသုတ ပြောပြမယ်! ဂေါတမ ဗုဒ္ဓဘုရား …
July 31, 2019 By EditoraBuddhism
သေသွားတဲ့အချိန်မှာ မပုတ်မသိုးရင် အရိယာ ( ရဟန္တာ ) လား ?
သေရင် ပုတ်တာ၊ ပျော့နေတာ တွေကြည့်ပြီး အရိယာပုဂ္ဂိုလ် ဟုတ်/မဟုတ်… ဆုံးဖြတ်နေကြ တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရှင်းပြချက်။ – “အမြင်နဲ့ ဆုံးဖြတ်သူများ” – ကြားဖူးတယ်မို့လား အရှင်ကောဏ္ဍညကြီးဆိုတာ။ သူက သံဃာ့ပရိသတ်ထဲမှာ မနေဘူး။ …
July 26, 2019 By EditoraBuddhism